China Mobile security barrier / mpanamboatra tariby roor coil telo sy mpamatsy | Xinpan
Fanokafana: Lava 10m, hahavony: 1.25m Sakany: 1.4m
Fanangonana: Lava 1,525m, haavo: 1.5m Sakany: 0.7m
Ny fotoana fisokafana: olona roa mila roa segondra manodidina.
Ny tadin'ny hareza telo coil dia azo apetraka mora foana nefa tsy mila manelingelina ny velaran'ny velarana amin'ny fangadiana lavaka na fananganana fototra.
Azo ampiasaina imbetsaka izy io, noho izany dia ampiasaina amin'ny hetsika fanatanjahan-tena lehibe, fiarovana ny trano fanatobiana entana, kaonseritra, fiofanana tampoka sns.
Tady hareza telo coil dia perimeter fiarovana haingana napetraka mety amin'ny fandrahonana mipoitra na ho sakana maharitra.
Miaraka amin'ny fahafaha-manaparitaka 480 ′ an'ny tariby hareza coil telo ao anatin'ny roa minitra fotsiny dia maka ny toeran'ny ekipa mpiasa miasa be any an-tsaha. Ny singa dia mizara olona roa fotsiny ary manala ireo fepetra mety hampidi-doza mifandraika amin'ny fametrahana an-tsaha ny coil tape barbed.
Rafitra famelomana haingana sy tsotra ary azo ampiasaina indray
Fahafahana ampitaina ao anatin'ny minitra vitsy monja
Manafoana ny filàna mpiasa an-tsambo be miasa any an-tsaha sy ny loza mety hitranga miaraka aminy
Olona roa ihany no mila mandefa
Safidy savaivony coil isan-karazany misy
Famaritana mahazatra: barb fohy misy kasety vita amin'ny galvanized ary fotony matevina avo lenta
Ny coil dia mifatotra amina famolavolana tadin-javatra hafa mba hampihenana ny fanandramana fidirana an-tsehatra
Mora mifangaro amin'ny fitaovana fitsikilovana fidirana an-tsokosoko
Manomboka amin'ny coil concertina roa telo-polo metatra mifanila amin'ny tany izahay miaraka amin'ny coil concertina iray enimpolo metatra mipetraka eo amboniny mba hanome sakana fiarovana avo 7 1/2 metatra.
Mametraka stanchion henjana isika isaky ny iraika ambin'ny folo metatra mba hanomezana fanampiana. Ny tariby mavesatra dia manome antoka fa tsy mihitatra na mihotsaka eo anelanelan'ny stancion ny singa. Ny famolavolana dia miantoka ny marimaritra iraisana. Tsy azo atao ny manitsaka an'io sakana io raha tsy ezahina be ny manapaka sy manala ny tariby. Mora mifangaro amin'ny fitaovana elektronika izy io.
Teo aloha: Fefy vy vita amin'ny fefy vy 1.5m, tontonana fefy 1.8m
Manaraka: Concertina hareza tariby BTO-22 hareza volony 10m isaky ny horonana
Cost of hareza
Fehin'ny tariby misy volo
Hareza misy rojo vy
Razor Wire harato